I-quartz ye-Strawberry - Umbala omuhle - Vuselela i-2021 - Ividiyo
I-Strawberry quartz crystal meaning nezakhiwo zokuphulukisa. okuluhlaza okotshani kwe-strawberry quartz.
Thenga ama-quartz wemvelo esitolo sethu
I-Quartz ingenye yamaminerali amaningi kakhulu emhlabeni, enza cishe u-12% woqweqwe loMhlaba. Ngaphandle kokuthi i-quartz ijwayelekile. Kude nesicefe. Izwe le-quartz lihluke ngokuphawulekayo. Phakathi kwezimo ezithakazelisa kakhulu emhlabeni we-quartz.
Kukhona ukufakwa okungajwayelekile okutholakala ngezikhathi ezithile kumakristalu acacile. Izazi ze-Gemologists zisebenzisa igama elithi "sagenitic quartz" ukubhekisa ku-quartz engenambala engenambala equkethe amakristalu afana nensimbi ofrutile, actinolite, goethite, tourmaline noma amanye amaminerali.
Incazelo ye-quartz yesitrobheli eluhlaza
Izakhiwo zencazelo ye-Strawberry quartz nezindawo zokuphulukisa
Ilitje lokuzalwa le-Strawberry quartz
Ingabe i-quartz ye-strawberry ingokwemvelo?
Kusho ukuthini i-quartz ye-strawberry?
Ingabe i-quartz ye-strawberry iyafana ne-rose quartz?
Ivelaphi i-quartz yesitrobheli?
Iyini i-chakra i-quartz yesitrobheli?
Ziyini izinzuzo zestrawberry quartz?
Iyini i-quartz yesitrobheli?
Ungayihlanza kanjani i-quartz ye-strawberry?
Isibonelo se-comon kakhulu i-quartz rutilate. Iqukethe ukufakwa kwe-rutile yegolide noma ne-titanium. I-Quartz ene-inclusions ebomvu ye-iron oxide ayitholakali kakhulu. Sivame ukusebenzisa igama elithi strawberry quartz noma ne-red fire quartz.
Ezinye izinhlobo zinokufakwa okuhle kakhulu okubonakala kuphela ngaphansi kokukhuliswa, okubolekisa i-quartz umbala obomvu ongacishe ufane. Abanye bane-inclusions ebonakalayo ebonakalayo futhi ingavela njenge-quartz ecacile enezinaliti ezibomvu, ama-flakes noma ama-spangles.
Kutholakala ezindaweni ezimbalwa kuphela, i-quartz ye-sitrobheli ithola imibala yayo ehlukile IHematite futhi I-Lepidocrocite ukufakwa. Abantu abaningi benze iphutha
Leli tshe eliyigugu le-quartz elicishiwe, kepha uma lihlolisiswa, kuyabonakala ukuthi i-quartz ye-sitrobheli imvelo ngokuphelele. Futhi, kufanele ukuthi uveze ukuthi igama lisetshenziswe ngendlela engafanele ngama-jeweler ambalwa. Bathengisa ingilazi namatshe angamanga njengamatshe ayigugu emvelo!
Igugu linemikhakha ebonakalayo ehlukile. Ichitha indawo yakhe yokuqala. Labo abathengiswa kuze kube manje emadwaleni ezinemibala baye bonke bevela eMadagascar futhi bangama-100% yemvelo. Ngaphandle kokwelapha, futhi ngaphandle kokuthuthukiswa futhi ngaphandle kokushisa! Imikhiqizo eyisimangaliso ngempela evela kumama kamama.
I-quartz eluhlaza sitrobheli ayikho. Yigama lokuhweba elisetshenziswa ngabathengisi bamatshe ayigugu abangasona isazi se-gemologist. Igama langempela laleli tshe yi-aventurine quartz. Umbala ovame kakhulu we-aventurine uluhlaza okotshani, kepha futhi ungaba owolintshi, onsundu, ophuzi, oluhlaza okwesibhakabhaka, noma ompunga.
I-fuchsite ethwala i-Chrome, izinhlobo ezahlukahlukene ze-muscovite mica, ukufakwa okudala futhi kunika isiliva eliluhlaza noma eliluhlaza okwesibhakabhaka. Amawolintshi nonsundu kubangelwa i-hematite noma i-goethite. Ngoba i-aventurine iyidwala, izakhiwo zalo zomzimba ziyahlukahluka: amandla ayo adonsela phansi angaba phakathi kuka-2.64-2.69 futhi ubunzima bawo buphansi kancane kune-quartz eyodwa-crystal cishe ngo-6.5.
ICherry quartz iyitshe eliyigugu lokufakelwa, i-quartz engelona iqiniso. kuhluke ngokuphelele futhi namanani entengo nawo ahluke kakhulu, ngakho-ke sicela uhlole itshe lakho ngokucophelela ngaphambi kokulithenga.
Ngetshe eliyigugu ukutholakala kwalo kuncane kakhulu, ngenxa yokubukeka kwalo okungajwayelekile, i-Strawberry quartz crystal meaning kanye nezindawo zokuphulukisa selivele lithole intshisekelo enkulu kubaphulukisi be-crystal nakwizazi zezinkanyezi. Siyisebenzisela ukuvuselela amandla enhliziyo agcwalisa umuntu ngomuzwa wothando.
ILibra yisibonakaliso se-zodiac se-quartz sitrobheli. Kulabo abazalwa kusukela ngoSepthemba 23 kuya ku-Okthoba 22, izinto ongathanda ukuzidedela, ezinjengokuzibamba kanye nokuzinqikaza, zizonyamalala ngegugu. Ezothando ngaphakathi kwakho zizovuka zithole amathuba okufuna uthando lapho itshe liseduze kwakho. i-crystal ivusa amathalente amasha njengomculo nokudweba noma ukubhala.
Yebo. Itshe liyenzeka ngokwemvelo. Itholakala kuphela eRussia, eBrazil naseMexico. Kodwa-ke futhi ungathola ukulingiswa okungelona iqiniso kwaleli tshe, ngokwesibonelo nge-quartz edayiwe ye-aventurine.
Itshe eliyigugu linencazelo nezakhiwo ezihlobene nothando. Abantu bakholelwa ukuthi inamandla okwenza amandla enhliziyo azungeze isifuba. I-crystal ingathola amandla othando avela ezulwini. Kungakwenza uzizwe uzolile ngokugcwalisa ingqondo yakho ngamandla othando.
I-rose Quartz itshe elihlukile. Leli tshe liwuhlobo lwe-quartz olubonisa umbala obomvana obuphaphathekile obusunduza umbala obomvu. Umbala uvame ukubhekwa njengokulandela amanani we-titanium, i-iron, noma i-manganese, kulokho okubhaliwe. Amanye ama-quartz ama-rose aqukethe izinaliti ezincane ze-rutile ezikhiqiza i-asterism ekukhanyeni okudluliswayo. Ucwaningo lwamuva lwe-X-ray lubonisa ukuthi umbala ubangelwa yimicu emincane yemicroscopic ye-dumortierite ngaphakathi kwe-quartz.
Amakristalu atholakala kakhulu eRussia nasezindaweni ezingomakhelwane ezifana naseKazakhstan, kanye naseBrazil naseMexico.
I-quartz ye-Strawberry inamandla amakhulu, iyashelela, futhi inamandla amakhulu njengoba isebenza kahle nama-chakra amane ngasikhathi sinye. Umsuka Chakra, Solar Plexus Chakra, Inhliziyo Chakra, futhi Crown Chakra. I-quartz ye-Strawberry ikhipha amandla isidingo esisodwa sokunqoba ubuthakathaka kanye namandla womqondo wakho nomoya wakho.
Leli tshe linamandla okukhulisa inhloso yomuntu yothando, ukwazisa nokuphana. Ingakhipha amandla ngaphandle futhi ithonye imvelo nabantu abakuzungezile. Itshe eliyigugu liyasiza ukuheha uthando lweqiniso noma umphefumulo womlingani. Kuyasiza ukulinganisela umzimba, umphefumulo nengqondo.
I-crystal ezuzisayo kulabo abahlala bedinga amandla aduduzayo noma athobisayo, njengabelaphi nabelaphi. Kuyikristalu eliyoqinisa ukuxhumana phakathi kwama-chakras wakho we-Heart ne-Crown futhi uwalethe ngokuvumelana.
Ungahlanza itshe lakho ngezindlela eziningi. Kuwukuhlakanipha ukugwema amanzi lapho uhlanza i-crystal yakho ngokomzimba. Gcoba ngendwangu emanzi uma kufanele ususe ukungcola nokungcola kanye ngesonto.
I-quartz yemvelo yesitrobheli iyathengiswa esitolo sethu segem
I-Strawberry quartz 15.90 ct
I-Strawberry quartz 13.14 ct
I-Strawberry quartz 8.86 ct
I-Strawberry quartz 7.55 ct
I-Strawberry quartz 7.33 ct
I-Strawberry quartz 9.97 ct